haino aman-jery > Journal succession > 2016-02 mpandimby ny Magazine > Ny Fanahy Masina
Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra miasa - mamorona, miteny, manova, mitoetra ao anatintsika, miasa ao amintsika. Na dia afaka manao izany aza ny Fanahy Masina tsy misy ny fahalalana, dia ilaina ary zava-dehibe ho antsika hianatra bebe kokoa momba izany.
Ny Fanahy Masina dia manana ny toetran’Andriamanitra, ampitoviana amin’Andriamanitra, ary manao zavatra izay Andriamanitra irery ihany no manao. Tahaka an'Andriamanitra, ny Fanahy Masina dia masina - masina loatra ka maha-mpanota ny manararaotra ny Fanahy Masina tahaka ny maha-Zanak'Andriamanitra azy (Hebreo). 10,29). Ny fitenenan-dratsy, ny fitenenan-dratsy ny Fanahy Masina dia fahotana tsy azo avela (Matio 1.2,32). Midika izany fa masina ny fanahy ary tsy nomena fahamasinana, toy ny any amin’ny tempoly.
Tahaka an’Andriamanitra, ny Fanahy Masina dia mandrakizay (Hebreo 9,14). Tahaka an’Andriamanitra, ny Fanahy Masina dia eny rehetra eny (Salamo 139,7-9). Tahaka an'Andriamanitra, ny Fanahy Masina dia mahalala ny zavatra rehetra (1. Korintiana 2,10-11; Jaona 14,26). Ny Fanahy Masina no mamorona (Joba 33,4; Salamo 104,30ary manao fahagagana (Matio 12,28; Romana 15,18-19) ary mandray anjara amin’ny asan’Andriamanitra. Andininy maromaro no milaza ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ho toy ny maha-Andriamanitra. Ao amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny fanomezam-pahasoavan'ny Fanahy, i Paoly dia niresaka momba ny fananganana mitovy amin'ny Fanahy, Tompo ary Andriamanitra (1. Korintiana 12,4-6). Mamarana ny taratasiny amin’ny vavaka telo izy (2. Korintiana 13,14). Nanomboka taratasy tamin’ny endrika telo hafa i Petera (1. Petrus 1,2). Na dia tsy porofon’ny maha tokana ny Trinite aza ireo ohatra ireo, dia manohana izany hevitra izany.
Ny fomba fanaovana Batemy dia manamafy ny mariky ny firaisana: "Ataovy batemy amin'ny anaran'ny Ray sy amin'ny Zanaka ary amin'ny Fanahy Masina" (Matio 28:19). Izy telo dia manana anarana, izay manondro fa olona iray izy ireo, ary rehefa manao zavatra ny Fanahy Masina dia Andriamanitra no manao azy. Rehefa miteny ny Fanahy Masina dia miteny Andriamanitra. Raha nandainga tamin'ny Fanahy Masina i Ananiasy dia nandainga tamin'Andriamanitra (Asa 5: 3-4). Nilaza i Peter fa tsy nandainga tamin'ny solontenan'Andriamanitra i Ananiasy, fa Andriamanitra mihitsy. Ny olombelona tsy mandainga amin'ny hery tsy miankina.
Ao amin’ny andalan-teny iray i Paoly dia milaza fa ny kristiana dia tempolin’Andriamanitra (1. Korintiana 3,16), ao amin’ny iray hafa dia milaza izy fa tempolin’ny Fanahy Masina isika (1. Korintiana 6,19). Tempoly hivavahana amin’Andriamanitra isika fa tsy hery tsy manana ny maha-izy azy. Rehefa manoratra i Paoly fa tempolin’ny Fanahy Masina isika, dia milaza izy fa Andriamanitra ny Fanahy Masina.
Koa ny Fanahy Masina sy Andriamanitra dia mitovy: « Ary raha nanao fanompoam-pivavahana sy nifady hanina ny Tompo izy, dia hoy ny Fanahy Masina: Atokàho amin'i Barnabasy sy Saoly Aho ho amin'ny asa izay niantsoako azy. » (Asan'ny Apostoly 13,2) , Eto dia mampiasa ny teny manokana toa ny an'Andriamanitra ny Fanahy Masina. Torak'izany koa, ny Fanahy Masina miteny fa ny Isiraelita dia nitsapa sy nanandrana azy ary niteny hoe: “Tamin’ny fahatezerako no nianianako hoe: Tsy ho any amin’ny fitsaharako ianareo.” (Hebreo 3,7- iray). Tsy anarana hafa ho an’Andriamanitra fotsiny anefa ny Fanahy Masina. Ny Fanahy Masina dia tsy miankina amin’ny Ray sy ny Zanaka, araka ny naseho tamin’ny batisan’i Jesosy (Mat 3,16-17). Ny telo dia mahaleo tena nefa iray ihany.Ny Fanahy Masina no manao ny asan’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika. Naterak’Andriamanitra sy naterak’Andriamanitra isika (Jaona 1:12), izay mitovy amin’ny nateraky ny Fanahy Masina (Jaona ). 3,5). Ny Fanahy Masina no fomba itoeran’Andriamanitra ao anatintsika ( Efesiana 2:22; 1. Johannes 3,24; 4,13). Ny Fanahy Masina no mitoetra ao anatintsika (Romana 8,11; 1. Korintiana 3,16) - ary satria mitoetra ao anatintsika ny fanahy, dia afaka milaza koa isika fa mitoetra ao anatintsika Andriamanitra.
Ny Fanahy no miteny (Asa 8,29; 10,19;11,12; 21,11; 1 Timoty 4,1; Hebreo 3,7 sns)
Ny Fanahy indraindray dia mampiasa ny mpisolo anarana hoe “izaho” (Asa 10,20;13,2)
Ny fanahy dia azo iresahana, alaim-panahy, fisaonana, fanevatevana, ary ampahoriana (Asa. 5,3; 9; Efesianina 4,30; Hebreo 10,29; Matio 12,31)
Ny Fanahy no mitarika, manelanelana, miantso ary mampianatra (Romana 8,14; 26; Asan’ny Apostoly 13,2; 20,28)
Romana 8,27 miresaka ny lohan'ny saina. Ny Fanahy no mandray fanapahan-kevitra - ny Fanahy Masina no nandray fanapahan-kevitra (Asa 15,28). Mahalala sy miasa ny saina (1. Korintiana 2,11; 12,11). Tsy hery tsy manam-paharoa Izy.Nantsoin'i Jesosy hoe Paraclete ny Fanahy Masina - nadika hoe Mpampionona, Mpanolo-tsaina na Mpiaro.
« Ary izaho te hangataka amin’ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny Fanahin’ny fahamarinana, izay tsy azon’izao tontolo izao horaisina, satria tsy hitany na fantany. Fantatrareo Izy, satria mitoetra eo aminareo Izy, ary ho ao anatinareo » (Jaona 14,16-17) .
I Jesosy no mpanolo-tsaina voalohany ny mpianatra. Rehefa mampianatra, mijoro ho vavolombelona, ​​manameloka, mitarika ary manambara ny fahamarinana Izy, dia ny Fanahy Masina (Jaona 1 Kor.4,26; 15,26; 16,8; 13-14). Anjaran’ny tena manokana ireo rehetra ireo. Nampiasa ny endriky ny lehilahy amin’ny teny grika hoe parakletos i Jaona satria tsy nilaina ny nampiasana ny endrika tsy miandany. Ao amin'ny Johannes 16,14 na dia ny mpisolo tena lehilahy "izy" aza dia ampiasaina aorian'ny fampiasana ny teny tsy miandany Geist. Mora kokoa ny nifindra tamin'ny mpisolo tena tsy miandany, fa i Johannes kosa tsy nanao izany. Ny saina dia resahina amin'ny "izy". Tsy misy dikany anefa ny fitsipi-pitenenana. Na izany aza, zava-dehibe ny hananana toetra manokana ny Fanahy Masina. Tsy hery tsy manam-paharoa Izy, fa mpanampy manan-tsaina sy masina izay miaina ao anatintsika.
Tsy misy fizarana mitondra ny lohateny hoe “Ny Fanahy Masina” ao amin’ny Baiboly. Mianatra kely avy amin’ny Fanahy Masina etsy sy eroa isika rehefa miresaka momba azy ny andinin-teny ao amin’ny Baiboly. Ny Testamenta Taloha dia manome antsika topimaso vitsivitsy. Ny fanahy dia teo amin'ny famoronana ny aina (1. Mosesy 1,2; Joba 33,4;34,14). Ny Fanahin’Andriamanitra dia nameno an’i Bezalila tamin’ny fahafahana hanorina ny tabernakely (2. Mosesy 31,3-5). Izy no nahatanteraka an’i Mosesy ary tonga tamin’ny alalan’ny loholona 70 koa (4. Mosesy 11,25). Nofenoiny fahendrena i Josoa amin’ny maha-mpitarika azy, toy ny namenoan’i Samsona hery sy fahaiza-miady (5. Mosesy 34,9; Mpitsara [space]]6,34; 14,6). Nomena an’i Saoly ny Fanahin’Andriamanitra ka nalaina indray (1. Sam 10,6; 16,14). Ny Fanahy no nanome an’i Davida ny drafitra momba ny tempoly (1. Chr 28,12). Nanome tsindrimandry ny mpaminany ny Fanahy mba hiteny (4. Mosesy 24,2; 2. Sabotsy 23,2; 1. Chr 12,18;2. Chr 15,1; 20,14; Ezekiel 11,5; ZAKARIA 7,12;2. Petrus 1,21).
Ao amin’ny Testamenta Vaovao koa dia ny Fanahy Masina no nanosika ny olona toa an’i Elizabeta sy Zakaria ary Simeona mba hiteny (Lio. 1,41; 67; 2,25-32). Feno ny Fanahy Masina i Jaona Mpanao Batisa hatramin’ny nahaterahany (Lio 1,15). Ny asa lehibe nataony dia ny manambara ny fiavian’i Jesoa Kristy, izay hanao batisa ny olona tsy amin’ny rano ihany fa amin’ny Fanahy Masina sy ny afo (Lio. 3,16).
Tena nanatrika sy nandray anjara tamin’ny fiainan’i Jesosy ny Fanahy Masina. Ny Fanahy no nahatonga azy ho torontoronina (Mat 1,20), nandry taminy taorian’ny batisany (Mat 3,16), nitondra azy tany an’efitra (Lk4,1) ary nanampy azy hitory ny vaovao tsara (Lio 4,18). Nandroaka demonia Jesosy noho ny fanampian’ny Fanahy Masina2,28). Tamin’ny alalan’ny Fanahy Masina no nanolorany ny tenany ho sorona ho an’ny fahotan’ny olombelona (Heb9,14) ary izany Fanahy izany ihany no nananganana azy tamin’ny maty (Romana 8,11).
Nampianatra i Jesoa fa ny Fanahy Masina dia hiteny amin’ny fotoan’ny fanenjehana ataon’ny mpianany (Mat 10,19-20). Nasainy nanao batisa ireo mpanara-dia an’i Jesosy tamin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina izy ireo8,19). Ary ankoatra izany, Andriamanitra dia manome ny Fanahy Masina ho an’ny olona rehetra rehefa mangataka aminy (Lio 11,13). Ny sasany amin’ireo zavatra manan-danja indrindra nolazain’i Jesosy momba ny Fanahy Masina dia ao amin’ny Filazantsaran’i Jaona. Ny olona voalohany dia tsy maintsy ateraky ny rano sy ny Fanahy (Jao 3,5). Mila fanavaozana ara-panahy ny olona ary tsy avy amin’ny tenany izany, fa fanomezana avy amin’Andriamanitra. Na dia tsy hita maso aza ny fanahy dia mitondra fiovana eo amin’ny fiainantsika izany (and 8).
Jesosy dia nampianatra: «Raha mangetaheta ianareo, mankanesa atỳ amiko, ka misotroa. Izay mino Ahy, araka ny voalazan’ny Soratra Masina, dia hisy onin’ny rano velona hiboiboika avy amin’ny tenany. Fa izao no lazainy momba ny fanahy izay tokony horaisin’izay mino Azy; fa ny fanahy tsy mbola tao; fa Jesosy tsy mbola nomena voninahitra » (Jao 7,37- iray).
Hoy i Johannes «Fa tsy mbola tao ny fanahy; fa Jesosy mbola tsy nomem-boninahitra »(and. 39) . Efa nameno lehilahy sy vehivavy sasany ny Fanahy talohan’ny fiainan’i Jesosy, saingy tsy ho ela dia ho tonga amin’ny fomba mahery vaika vaovao izany – amin’ny Pentekosta. Efa nomena ny fanahy izao izay rehetra miantso ny anaran’ny Tompo (Asa 2,38-39). Nampanantena ny mpianany i Jesosy fa homena an’ireo izay hitoetra ao aminy ny Fanahin’ny fahamarinana4,16-18). Io fanahin’ny fahamarinana io dia mitovy amin’ny hoe Jesosy mihitsy no tonga tamin’ny mpianany (and. 18), satria Izy no Fanahin’i Kristy sy Fanahin’ny Ray – nirahin’i Jesosy sy ny Ray (Jaona 1.5,26). Ny Fanahy no mahatonga an’i Jesosy ho azon’ny olona rehetra sy ny fanohizana ny asany.Nampanantena i Jesosy fa ny Fanahy dia hampianatra ny mpianatra sy hampahatsiahy azy ireo izay rehetra nampianarin’i Jesosy azy ireo (Jaona 1 Kor.4,26). Ny Fanahy dia nampianatra azy ireo zavatra izay tsy azony talohan’ny nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty6,12- iray).
Ny Fanahy dia miresaka momba an’i Jesosy (Jaona 15,26;16,24). Tsy manambara ny tenany izy, fa mitarika ny olona ho amin’i Jesosy Kristy sy ny Ray. Tsy miteny ho azy Izy, fa araka izay tian’ny Ray ihany (Jaona 16,13). Soa ihany fa tsy miara-mitoetra amintsika intsony i Jesosy satria ny Fanahy dia afaka miasa ao amin’ny olona an-tapitrisany (Jaona 16,7). Ny Fanahy dia mitory ny filazantsara sy mampiseho amin’izao tontolo izao ny fahotany sy ny helony ary manatanteraka ny filany ny rariny sy ny hitsiny (and. 8-10). Ny Fanahy Masina dia manondro ny olona ho amin’i Jesosy ho vahaolana amin’ny fanamelohana sy loharanon’ny fahamarinana.
Nilaza i Jaona Mpanao Batisa fa i Jesoa dia hanao batisa ny olona amin’ny Fanahy Masina (Mar 1,8). Izany dia nitranga tamin’ny Pentekosta taorian’ny nitsanganany tamin’ny maty, rehefa nanome hery vaovao ny mpianatra ny Fanahy ( Asa. 2 ). Tafiditra ao anatin’izany ny fiteny miteny azon’ny olona avy amin’ny firenena hafa (and. 6), ary nisy fahagagana mitovy amin’izany tamin’ny fotoana samy hafa rehefa nitombo ny fiangonana (Asan’ny Apôstôly). 10,44-46; 19,1-6), saingy tsy voalaza fa ireo fahagagana ireo dia mitranga amin'ny olona rehetra izay nahita ny lalan'ny finoana kristiana.
Nilaza i Paoly fa ny mino rehetra dia miforona ho tena iray, dia ny fiangonana, ao amin’ny Fanahy Masina (1. Korintiana 12,13). Efa nomena ny olona rehetra izay mino ny Fanahy Masina (Galatiana 3,14). Na nisy fahagagana na tsy nisy dia natao batisan’ny Fanahy Masina ny mino rehetra. Tsy ilaina ny mikatsaka sy manantena fahagagana manokana mba hanaporofoana fa vita batisa amin’ny Fanahy Masina ny olona iray.
Tsy mitaky ny mpino hatao batisa amin’ny Fanahy Masina ny Baiboly. Entanina kosa ny mpino tsirairay mba ho feno ny Fanahy Masina mandrakariva (Efes 5,18) mba hahafahan’ny olona iray mamaly ny fitarihan’ny Fanahy. Ity fifandraisana ity dia mitohy fa tsy hetsika tokana. Raha tokony hitady fahagagana isika, dia tokony hitady an’Andriamanitra ary hamela azy hanapa-kevitra raha hisy fahagagana hitranga sy rahoviana. Tsy amin’ny alalan’ny fahagagana ara-batana miseho matetika no ilazan’i Paoly ny herin’Andriamanitra, fa amin’ny alalan’ny fiovana mitranga eo amin’ny fiainan’ny olona iray - ny fanantenana, ny fitiavana, ny faharetana, ny fanompoana, ny fahatakarana, ny fiaretana ny fijaliana, ary ny fitoriana amin-kerim-po (Romana 1.5,13; 2. Korintiana 12,9; Efesianina 3,7; 16-18; Kolosiana 1,11; 28-29; 2. Timoty 1,7-8e). Ireo fahagagana ireo koa dia azo antsoina hoe fahagagana ara-batana satria Andriamanitra no manova ny fiainan’ny olona.Ny Asan’ny Apostoly dia mampiseho fa ny Fanahy no nanampy ny fiangonana hitombo. Ny Fanahy dia nanome fahafahana ny olona hitatitra sy hijoro ho vavolombelona momba an’i Jesoa (Asan’ny Apostoly 1,8). Namela ny mpianatra hitory Izy (Asa 4,8, 31; 6,10). Nanome toromarika an’i Filipo izy ary nampiakatra azy tatỳ aoriana (Asa 8,29; 39). Namporisika ny Fiangonana sy nanangana mpitarika ny Fanahy (Asa 9,31; 20,28). Niresaka tamin’i Petera sy ny Fiangonan’i Antiokia Izy (Asa 10,19; 11,12; 13,2). Niasa tao Agabo izy rehefa nahita mialoha ny mosary ka nitarika an’i Paoly handositra (Asan’ny Apôstôly). 11,28; 13,9-10). Izy no nitarika an’i Paoly sy Barnabasy teny an-dalana (Asa 13,4; 16,6-7) ary nahatonga ny fiangonan’ny apostoly tany Jerosalema handray fanapahan-kevitra (Asa5,28). Naniraka an’i Paoly tany Jerosalema izy ary nampitandrina azy (Asan’ny Apostoly 20,22:23–2; 1,11). Nisy ny Fiangonana ary nitombo noho ny fiasan’ny Fanahy Masina tao amin’ny mpino.
Mitarika antsika ho amin’ny fibebahana Izy ary manome antsika fiainana vaovao (Jaona 16,8; 3,5-6)
Izy no mitoetra ao anatintsika, mampianatra antsika ary mitarika antsika (1. Korintiana 2,10-13; Jaona 14,16-17,26; Romana 8,14)
Mihaona amintsika ao amin’ny Baiboly, amin’ny vavaka ary amin’ny alalan’ny Kristianina hafa Izy no fanahin’ny fahendrena ary manampy antsika hibanjina ny zavatra amin-kerim-po, fitiavana ary fifehezan-tena (Efes.1,17; 2. Timoty 1,7)
Ny Fanahy no mamora sy manamasina ary manova ny fontsika (Romana 2,29; Efesianina 1,14)
Ny Fanahy no mampisy fitiavana sy vokatry ny fahamarinana ao anatintsika (Rom5,5; Efesianina 5,9; Galatianina 5,22-23)
Ny Fanahy dia mametraka antsika ao amin’ny fiangonana ary manampy antsika hahatakatra fa zanak’Andriamanitra isika (1. Korintiana 12,13; Romana 8,14-16)
Tokony hivavaka amin’Andriamanitra amin’ny fanahy isika (Fil3,3; 2. Korintiana 3,6; Romana 7,6; 8,4-5). Miezaka ny hampifaly azy isika (Galatianina 6,8). Rehefa tarihin’ny Fanahy Masina isika dia manome antsika fiainana sy fiadanana (Romana 8,6). Amin’ny alalany no ananantsika manatona ny Ray (Efesiana 2,18). Manampy antsika amin’ny fahalementsika Izy ary mijoro ho antsika (Romana 8,26- iray).
Ny Fanahy Masina koa dia manome antsika fanomezana ara-panahy. Manome mpitarika ho an’ny Fiangonana Izy (Efesiana 4,11), Ny olona manao ny asa fiantrana fototra ao amin’ny fiangonana (Romana 12,6-8) ary ireo manana fahaiza-manao manokana amin'ny asa manokana (1. Korintiana 12,4-11). Tsy misy manana ny fanomezam-pahasoavana rehetra ary tsy ny fanomezana rehetra no omena ny olona rehetra (and. 28-30). Ny fanomezam-pahasoavana rehetra, na ara-panahy na tsia, dia tokony hampiasaina amin'ny asa manontolo - ny Fiangonana manontolo (1. Korintiana 12,7; 14,12). Zava-dehibe ny fanomezana rehetra (1. Korintiana 12,22- iray).
Isika mandraka androany dia tsy nandray afa-tsy ny voaloham-bokatry ny Fanahy, izay mampanantena antsika mihoatra lavitra noho ny ho avy (Romana). 8,23; 2. Korintiana 1,22; 5,5; Efesianina 1,13- iray).
Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika. Ny zavatra rehetra ataon’Andriamanitra dia ataon’ny Fanahy Masina. Mamporisika antsika àry i Paoly mba hiaina ao anatin’ny Fanahy Masina sy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina (Galatiana 5,25; Efesianina 4,30; 1. Tes 5,19). Koa andeha isika hihaino izay lazain’ny Fanahy Masina. Fa rehefa miteny izy, dia Andriamanitra no miteny.